Ma tahay qof shaqadoon ahaan noogu qoran oo qaba naafanimo saamayn ku leh awooddaada shaqo? Markaas Samhall waxay kuu noqon kartaa goob shaqo oo kugu habboon. Waxaad fursad u heleysaa in aad horumar ku sameysid shaqada, oo aad higsato in aad kor u qaaddid fursadahaaga aad shaqo ka heleysid shaqabixiye kale. Haddii aad 30 jir ka yartahay, waxaad leedahay mudnaanta in aad ka hesho Samhall, shaqo waqti go’an ah.
Waa annaga oo ah Xafiiska shaqada, cidda qiimeyn ku sameyneysa in aad xaq u leedahay in Samhall shaqo lagaa siiyo iyo in kale. Taageerada aannu ku siin karnaa, waxay ku xirantahay sida ay adiga xaaladdaadu tahay.
Haddii aad daneyneysid in aad ka shaqeysid Samhall, waxaad wax ka billaabeysaa in aad u sheegtid shaqaalaha xafiiska shaqada. U diyaargarow si aad ugu qancin karto sababta ay taageeradu kor ugu qaadeyso fursadahaaga ku aaddan shaqada.
Si wadajir ah ayeynu xaaladdaada uga eegeynaa dhan walba. Haddii aad buuxiso shuruudaha ka shaqaaloobidda Samhall waxaa dhici karta in aad booqasho ugu tagto. Markaas ayaad wax dheeraad ah ka ogaaneysaa sida ay tahay in laga shaqeeyo oo horumar lagu dhex sameeyo Samhall.
Haddii aannu u aragno in Samhall ay kugu habboontahay waxaa dhici karta in lagaa shaqaaleysiiyo marka uu soo baxo boos bannaan. Markaas waxaan heshiis la gaareynaa adiga iyo Samhall halkaas oo aannu tusaale ahaan ku qeexeyno hadafka aad shaqaaleysiinta ka leedahay, tallaabooyinka kala duduwan ee aad u baahantahay in aad qaaddo si aad horumar u sameysid iyo taageerada aad u baahan kartid.
Inta aad shaqaaleysantahay oo dhan qofka madaxda kuu ahi wuu ku dhiirrigelin doonaa, ku tijaabin doonaa, kuna taageeri doonaa. Hadafku waa in aad maalin uun diyaar u noqotid in aad tallaabta xigta qaaddid oo aad uga sii gudubtid shaqo aad shaqa bixiye kale ka heleysid.